Wararka - Codsiyada ballaaran ee Dhismayaasha Qaboojinta
Ballaar Codsiyada Dhismaha Qaboojinta
Mowjadaha qaboojinta ayaa ugu horreyn loo isticmaalaa kuleylka, hawo-qaadashada, iyo qaboojinta (HVAC) iyo ujeedooyinka warshadaha. Waxay bixisaa hawlgal kharash-ool ah iyo tamar wax ku ool ah oo nidaamyo u baahan qaboojin. In ka badan 1500 oo warshadood ayaa isticmaala tiro aad u tiro badan oo biyo ah si ay u qaboojiyaan dhirta. Nidaamka HVAC waxaa caadi ahaan looga isticmaalaa dhismayaasha waaweyn ee xafiisyada, iskuulada, iyo isbitaalada. Taawarrada warshadaha qaboojinta ayaa ka weyn nidaamyada HVAC waxaana loo isticmaalaa in looga saaro kuleylka ku dhex jira nidaamyada biyaha qaboojinta ee wareegaya ee loo isticmaalo dhirta tamarta, saliidda batroolka, dhirta kiimikada, dhirta ka shaqeysa gaaska dabiiciga ah, dhirta wax soo saarka cuntada iyo xarumaha kale ee warshadaha.
Nidaamyada warshadaha iyo mashiinadu waxay soo saaraan kuleyl aad u tiro badan oo baahinta joogtada ahi ay lagama maarmaan u tahay hawlgal hufan. Kuleylka waa inuu ahaadaa deegaanka. Tani waa iyada oo loo marayo habka isweydaarsiga kuleylka kaas oo aasaas u ah tiknoolajiyada munaaradda qaboojinta.
Waa wax xiiso leh in kasta oo munaaradaha qaboojinta ay yihiin aaladaha 20th qarniga, aqoonta iyaga ku saabsan ayaa dhab ahaan xaddidan. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in munaaradaha qaboojiyaha ay yihiin ilo wasakhaysan, laakiin waxa kaliya ee ay hawada ku sii daayaan waa uumiga biyaha.
Ka dib sanado badan oo horumar ah tiknoolajiyaddan, munaaradaha qaboojinta waxaa lagu heli karaa noocyo iyo cabirro kala duwan. Mid kasta oo ka mid ah kuwan waxaa lagu dabbaqi karaa qaabab xamuul gaar ah, sababta ay muhiim u tahay in la muujiyo xulashooyinka la heli karo. Xusuusnow in kasta oo naqshadaha kaladuwan ay jiraan, shaqada aasaasiga ah ayaa weli ah tan kuleylka kuleylka nidaamka dhismaha ama geedi socodka hawada uumi bixinta. Waa kuwan qoondayn qaarkood:
A.Munaarad qaboojiye qabyo ah
B.Munaaradda qaboojinta hawada
C.Munaaradda qaboojinta qabyada ah
D.Munaaradda qaboojinta socodka hawada
E.Munaaraddii qaboojinta-lagu yaqaan
F.Qaab muuqaalkiisu yahay munaarad qaboojin ah
G.Munaaradda qaboojinta ee ku saleysan habka wareejinta kuleylka
Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu qaadi karaa dhowr munaaradood oo wax qaboojiya. Tusaale ahaan, u kala saarista munaaradaha qaboojinta marka la eego habka kuleylka loo wareejiyo waxay siineysaa seddex ikhtiyaar: munaaradaha qaboojinta qallalan, Minaaradaha wareega qaboojinta ee furan iyo munaaradaha qaboojinta wareega ee xiran / munaaradaha qaboojinta dareeraha.
Mowjadaha qaboojinta ayaa laga yaabaa inay guud ahaan kharash ahaan waxtar u leeyihiin qaboojinta warshadaha marka la barbar dhigo xulashooyinka kale, laakiin caqabadda waxtarka waxay noqon kartaa hoos u dhac. La socodka cunsuriyadda wax ku oolnimada ayaa muhiim ah maadaama ay hubinayso waxyaabaha soo socda:
►Isticmaalka biyaha oo yaraaday
►Nolosha adeegga ee waqtiga loo kordhiyay
►Qiimaha hawlgalka oo yaraaday
Si aad u ilaaliso munaaradda qaboojinta inay si hufan u shaqeyso, seddex shay ayaa muhiim ah: fahamka nooca taawada qaboojinta ee aad isticmaaleyso, u isticmaal kiimikada si hufan oo aad ula socoto nidaamka biyaha lumiya
Nidaamka munaaradda qaboojinta ayaa ku badan warshado badan, oo ay ka mid yihiin awoodda, ganacsiga, HVAC iyo warshadaha. Nidaamka warshadaha, nidaamku wuxuu diidayaa kuleylka mashiinka, qalabka kuleylka kuleylka ee ilaha kale. Gaar ahaan, munaaradaha qaboojinta warshadaha ayaa caan ku ah dhirta ka baaraandegta cuntada, sifeynta batroolka, dhirta gaaska dabiiciga ah iyo dhirta kiimikada.
Codsiyada kale ee warshadaha:
►Biyaha kombaresarada hawada
►Duro caaga & mashiinka wax taaj oo kale dharbaaxo
►Mashiinka ridaya dhinta
►Warshad qaboojiyaha iyo qaboojinta
►Geeddi socodka Anodizing
►Warshad dhalinta koronto
►Nidaamyada qaboojiyaha ee biyaha iyo mashiinnada VAM-ka
Doorashada xalka qaboojinta waa nooc ka mid ah tixgelinta guud ee qiimaha, booska, buuqa, biilasha tamarta iyo helitaanka biyaha. Haddii aadan hubin nooca aad u baahan tahay, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho hagitaan dheeraad ah oo xor ah.